देउवाले संसदमा बि’श्वासको मत जितेर साइबर हरुको घ’मण्ड उतार्नु पर्छ ज्वाला संग्रौला:: Mero Desh
देउवाले संसदमा बि’श्वासको मत जितेर साइबर हरुको घ’मण्ड उतार्नु पर्छ ज्वाला संग्रौला
Published on: ३ श्रावण २०७८, आईतवार १०:०२
काठमाण्डौ।सामाजिक अभियानता ज्वाला संग्रौला केही दिन अघि मात्र हिरासत बाट बाहिर आएका छन !उनलाई ओलिका साइबर हरुले रास्ट्रपति वि’रुद्ध बोलेको भन्दै प्रहरी परिसर काठमाडौ टेकुमा जाहेरी दिएका थिए ! उनी हरु सामाजिक काममा व्यस्त रहेता पनि नेपाल प्रहरीले तपाई हरु वि’रुद्ध जाहेरी परेको छ !
आउनु होस छलफल गरौं भनी बोलाएर हिरासत राखिएको हो! उनले लेख्छन् यो लोकतन्त्र मा बोल्न लेख्न पाउनु पर्ने हो ! तर ओलि शासन का साइबर हरुले लोक”तन्त्र को” महसुस गर्न दिएन!त्यसैले शेरबहादुर देउवाले आज संसद मा बि’श्वासको मत लिएर ओली र उनका साईबर स्याल हरुको घमण्डको घैंटो फुटाउनु पर्छ भनेका छन !
यो पनि लेख्छिन:साढे तीन वर्षसम्म यिनका” बा “को सरकार मस्त सुत्यो ,सामाजिक अभियान्ता र पत्रकारहरु ले देश चलाए! जब सत्ताबाट स्याल लखेटिए झैं घोक्र्याई एर लखेटिनु पर्यो , अनि सडकमा यो रुवा”बासी र चिच्या” हट? त्यो पनि गुण्डागिरी पृष्ठभूमिका दरसन्तान “हरुको!”
“बिपतको बेला गरिबको घरमा चामल बो’केर जॅादै गर्दा मलाई २३ दिन बन्धक बनाउन एस’एसपील लाई ठा’डो आदेश दिने तिमीजस्ता अघोषित लुटेराहरुले जनतालाई राहत दिन्छौ भनेर कस्ले पत्याउने हॅ ? पख, तिमीहरुका नग्न हर्कतको हिसाब एकदिन समयले जरुर गर्नेछ।
केपी ओलीले पानीजहाजको टिकट बुकिङ खुला गरेको १६ पुस ०७५ मा हो । ३० असार ०७८ मा बालुवा टार छाड्दा पनि बुकिङ खुला नै थियो, केवल पानीजहाज थिएन । चुनावी वाचाअनुसार त ‘बा’ मोनो रेल बाट बाल कोट फर्कनु थियो । चुच्चे मुख भएको रेलमा होर्डिङ बोर्ड टाँगिनु थियो । पानीजहाजको झन्डामा फोटो हुनु थियो ।
भएन । क्षतिपूर्ति यु’थ’फो”र्सको स्कर्टिङले गर्‍यो, स्कर्टिङ नै मोनोरेल भयो ।ल’ज्जाजनक बहि’र्गमनलाई” उत्सव बनाउने त्यो दयनीय प्रयास शवयात्रामा पञ्चेबाजाजस्तै थियो, तर ‘बा’ले रोक्नुभएन, रोकिनुभएन । यसअघि एमालेकै तीन प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार छाडेका थिए, तर यस्तो देखिएको थिएन । यो त नयाँ एमाले थियो, ‘बा’ एमाले ।